होशियार! ड्रग्स सेवन छोड्नुहोस्-नत्र, आउँदैछन् आमाहरू - प्रतिविम्ब.com %
दार्जीलिङ, 11 अगस्त।
होशियार! ड्रग्स सेवन आजै छोड्नु होस्, नत्र, आमाहरू आउँदैछन्। यदि टेर्नु हुँदैन भने थप्पड खान तयार बन्नुहोस्। यतिले पनि नपुगे पुलिसकै भाषा बुझ्नुहोस्। आज यस्तै कठोर सन्देश लिएर तकभर दोस्रो विभाग लिम्बु बस्तीमा आमा संगठनको गठन भएको छ। जसले आफ्नो गाउँबाट सम्पूर्ण दार्जीलिङलाई नै ड्रग्समुक्त बनाउने संकल्प गरेको छ। ड्रग्सखोरहरूको कारण गाउँ नै बद्नामीको चपेटमा पर्नका साथै प्रत्येक घर नै यसको जंजालमा परेर विरक्त बनेपछि नै तकभर दोस्रो विभाग वा लिम्बु बस्तीका प्रत्येक घरका आमाहरू मिलेर यो संगठनको गठन गरेका हुन्।
जसले यो आफ्नो गाउँसँगै छिमेकी गाउँ साथै सम्पूर्ण दार्जीलिङलाई नै ड्रग्समुक्त बनाउने संकल्प गरेको संगठनकी अध्यक्षा नसिका राईले जनाइन्। एक प्रश्‍नको उत्तरमा उनले भनिन्-तकभर दोस्रो विभाग वा लिम्बु बस्ती ड्रग्स सेवन र बेचबिखनको अड्डा बनिसकेको थियो। प्रत्येक घरका छोराहरू यसको चपेटमा परिसकेका थिए, जसबाट मेरो परिवारसमेत अछुतो रहेको थिएन।
तर ड्रग्सको जंजालमा परिसकेका गाउँका छोराहरूलाई एकै रातमा ड्रग्समुक्त बनाउन सक्ने अवस्था नै थिएन। जसको कारण गाउँका सम्पूर्ण आमाहरूले लगभग एक वर्षसम्म गाउँ-घरलाई ड्रग्समुक्त बनाउनको लागि सर-सल्लाह मात्रै गर्यौं। एक वर्षको सर-सल्लाहपछि गत अप्रेल महीनामा मात्रै आमा संगठनको गठन गरिएको हो। जसमा हाल 34 जना आमाहरू सामेल छन् भने एउटा स्पेशल दलको पनि गठन गरिएको छ। यो स्पेशल दलले दलभित्र भएका कतिपय गोप्य विषयहरूमाथि कार्वाही गर्ने गर्छ। यसका साथै आमा संगठनले सम्भावित ड्रग्सका अड्डाहरूमा अचानक भ्रमण गर्ने पनि गरिरहेको छ।
यदि कसैले ड्रग्स सेवन गरिरहेको भेट्टाए उनीहरूमाथि कस्तो कार्वाही गर्ने गरिएको छ? भन्ने प्रश्‍नको जवाबमा आमा संगठनकी अध्यक्षा राईले भनिन्-पहिला हामी उनीहरूलाई राम्रो मुखले सम्झाउने गर्छौं, यदि राम्रो मुखले सम्झाउँदा पनि नभए थप्पड पनि लगाउनेछौं। यति पनि नभए हामी ती ड्रग्सखोरहरूलाई पुलिसमा नै जिम्मा लगाउनेछौं। यस विषय लिएर आमा संगठनले पुलिस प्रशासनसित पनि कुराकानी गरिसकेको जनाउँदै यसबारे समाजलाई जागरूक बनाउने दिशामा पनि कार्य गरिरहेको जनाइन्। उनले भनिन्-तकभर दोस्रो विभाग लिम्बु बस्तीमा7वटा समाज छन्, यस अभियानको लागि7वटै समाजले लिखितरूपमा सहमति जनाएका छन्।
यसका साथै संगठनले आफ्नो गाउँसँगै छिमेकी गाउँहरूमानै पनि ड्रग्स सेवन वा बेचबखिनको विरोधमा पोस्टरिङ गरिरहेको जानकारी गराउँदै यो संगठनको गठन भएपछि गाउँमा ड्रग्सखोरहरूको आउजाउ र बेचबिखनमा पनि निकै कमी आएको दावी गरेको छ। राईले भनिन्-अप्रेल महीनाअघिसम्म यो गाउँमा दिन-रात गाडी, बाइक आदिमा नौलो मानिसहरू आउने गर्थे। तर उनीहरू ड्रग्स किन्न वा बेच्नकै लागि आएको हो भन्ने प्रमाण हुन सकेन। उनले भनिन्-ड्रग्स सेवन एउटा सरूवा रोग हो। यदि समयमा नै सचेत बनिएन भने यो रोगले प्रत्येक घरलाई नै सताउनेछ। यसैले सबै घरलाई यो रोगको चपेटबाट रक्षा गर्ने उद्देश्यले नै यो संगठनको गठन गरिएको हो, जसलाई प्रत्येक घरका आमाको सहयोगको खाँचो छ। यसै विषय लिएर आज लिम्बु बस्ती समाज घऱमा7वटा समाज र अन्य संघ-संस्थालाई लिएर एक जागरूकता सभाको आयोजना गरिएको पनि राईले जानकारी गराइन्।
गोर्खाल्यान्डको लागि म सही व्यक्ति होइन – राजु विष्ट : खरसाङमा देखाइयो कालो झण्डा
स्थायीकरणको आशा लिएर अप्पर प्राइमेरी भोलेन्टियर शिक्षकहरूले मुख्यमन्त्रीलाई पहाड़मा स्वागत जनाउने
पट्टा दिनुअघि जमीनको टाइटल पाइएको हो – एचएफभीओ
जोइन्ट फोरमद्वारा सह-श्रमायुक्त कार्यालय घेराउ अनि ज्ञापन पेश
गाउँवासीको नजीकको सरकार हराएको छ